septembre 2021 – Page 3
Pejy an-tsary : Fidinana ifotony natao tao Antsirabe
Fidinana ifotony nataon’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjaka­na, Minisitry ny Fitsarana, Andriamatoa IMBIKI Herilaza tao amin’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany (TPI) Antsirabe
Fanohizana ny fanamafisana ny ezaka ho fanafainganana ny raharaham-pitsarana any Ankazobe
Taorian’ny toromarika hentitra izay nomen’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjaka­na, Minisitry ny Fitsarana, A/toa IMBIKI Herilaza amin’ny fanamafisana ny ezaka rehetra izay efa natao ho fanafainganana ny raharaham-pitsarana momba ny ady heloka sy ho fanohizana ny atrikasa izay efa natomboka teto Antananarivo, dia nidina ifotony teny anivon’ny Fitsarana ambaratonga voalohany Ankazobe, izay mbola ao anatin’ny fari-piadidiam-pitsa­rana Analamanga ny ekipan’ny « Cellule de Veille Stratégique (CVS) ». Nisy ny fihaonana tamin’ny tompon’andraikitry ny Fitsarana sy ny Fonja tao an-toerana nampitàna mivantana tamin’izy ireo ny fepetra rehetra tokony ho raisina ahafahana mitsara ireo voafonja izay mbola tsy voatsara manaraka ny fenitra takian’ny lalàna.
Ny Faritra Analamanga dia voalohany amin’ireo fari-piadidiam-pitsa­rana betsaka voafonja eto Madagasikara ka hametrahana lamina manokana ny fanafainganana ny raharaham – pitsarana ary tafiditra ao anatin’izany ny Fitsarana ao Ankazobe.
Notanterahana tamin’io fotoana io ihany koa ny fametrahana ny sampan-draharaha FJPA eo anivon’io Fitsarana io izay hisahana manokana ny fitakiana ny lamandy sy ny sarany lany mivoaka amin’ny didim-pitsarana (recouvrement des amendes pénales et des frais et dépens). Tamin’izany no nanolorana ny fitaovana ara-informatika avy amin’ny Projet d’Appui à la Justice à Madagascar (PAJMA) ho ampiasain’io sampan-draharaha io.
Pejy an-tsary : Fivoriana sy dinikasa nataon’ireo mpiraki-draharaha eo anivon’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany (TPI) Anosy
Hanao ny tandrifiny ireo mpiraki-draharaha
Asa fa tsy kabary. Vonona ny hanao ny tandrify azy ireo mpiraki-draharaha eo anivon’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany (TPI) Anosy, amin’ny fanafainganana ny raharaham-pitsarana. Anisany ny fanafainganana ny fanoratana ireo didim-pitsarana nitarazoka. Tanjona ny hahazo vokatra mivaingana anaty 3 volana manaraka izao. Nivoitra ireo androany Talata 21 Septambra 2021, nandritra ny fivoriana sy dinikasa notontosaina teny amin’ny Lapan’ny Fitsarana Anosy.
Nitarika ny fivoriana ny Lehiben’ny mpiraki-draharaha eo anivon’ny TPI Anosy, Maitre HERINATREHANA Inham Ella
Pejy an-tsary androany : Fitsidihan’ny Mpandrindra ny Rafitry ny Firenena Mikambana, SEM Issa SANOGO
Fampandrosoana ny asam-pitsarana :
Manamafy ny fanohanany ny Rafitry ny Firenena Mikambana
Matotra ny fiaraha-miasa amin’ireo mpiara-miombon’antoka. Vonona ny hanamafy ny fanohanany ny asa fampandrosoana ny raharaham-pitsarana ny Rafitry ny Firenena Mikambana. Nitsidika ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana Atoa IMBIKI Herilaza, teto Faravohitra, ny Mpandrindra ny Rafitry ny Firenena Mikambana, SEM Issa SANOGO, androany Talata 21 Septambra 2021.
Lafiny maro no hiompanan’ny fanampiana. Anisany ny fitantanana, sy ny fanajana ny zon’olombelona.
Tsy handeferana ny gaboraraka
Hentitra ny fanaraha-maso ny asam-pitsarana. Tsy handeferana intsony ny gaboraraka, tahaka ny famoahana antsokosoko voafonja sy ny fanaovana kolikoly amin’ny lafiny rehetra. Henjana ny sazy miandry ireo izay minia mbola manao izany. Hidina ifotony hanao fijirihana ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny.
Hafainganina ihany koa ny raharaham-pitsarana. 3 volana no hanenjehana ny taha 70/30 (ho 70% ireo voafonja efa notsaraina, ary 30% sisa ireo miandry fitsarana). Nivoitra ireo androany Talata 21 Septambra 2021 teto Faravohitra, nandritra ny tafatafa tamin’ny mpanao gazety, nataon’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, Atoa IMBIKI Herilaza.